जनकपुर:वैदेही हस्पिटलको लापरबाहीले फेरि एक नवजात शिशुको मृत्यु ! - Hamro Janakpur
जनकपुर:वैदेही हस्पिटलको लापरबाहीले फेरि एक नवजात शिशुको मृत्यु !
२०७७ चैत्र १७, मंगलवार १७:०७
जनकपुरधाम । धनुषाको जनकपुरधाम स्थित वैदेही हस्पिटलको लापरबाहीकाे कारणले फेरि एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ ।
वैदेही अस्पतालकाे लापरबाहीका कारण सुत्केरी व्याथाले च्यापेपछि सोमवार साँझ भर्ना हुन आएकी धनुषाको लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका–७ की शिला यादवको बच्चा नजन्मिदै पेटमै मरेको हो ।
साँझ साढे ६ बजे भर्ना हुनेबेला ५ मिनेटमै डाक्टरलाई बोलाइदिने भनेर अस्पतालमा डयुटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले आश्वसान दिएका थिए ।
अस्पतालमा डयुटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पहिले भर्ना गर्नु केही हुँदैन् हामी डाक्टरलाई फोन गरेकाे भन्दै ५ मिनेटमै आउने आश्वासन दिए । तर बच्चा अन्तिम कण्डिसनमा पुगिसकेपछि राति डेढबजे मात्र डाक्टर अाएकाे शिलाकी श्रीमान रमण यादवले जानकारी दिनुभयो । यादवले डाक्टरलाई बोलाइदिन पटक पटक हार गुहार गरि रहदा पनि तर पैसा लुट्ने चक्करमा अस्पतालले विरामीलाई अझै सिरियस बनाउन खोजेकाे मेरो बच्चा त्यसै मरेको होइन् अस्पतालले हत्या गरेको उनले अाराेप लगाए ।
डाक्टर नहुँदा समेत अस्पतालले विभिन्न बहानामा विरामीको आफन्तलाई अल्झाउँदै पर्खिन भनेका थिए । विरामी आएकै बेला डा. रोशन मिश्राले गाइनोक्लोजिस्ट डाक्टर सुनिता राय यादवलाई फोन गरेको र आउँदै भनेर जवाफ फर्काएपनि नआएको अस्पतालका संचाकल सदस्य समेत रहेका डा. सन्तोष साहले बताए ।